Imali yokutshintsha US dollar (USD) Ukuze Rand (ZAR) bahlala zonaniso Forex
Amazinga Forex exchange oluhlaziyiweyo: 16/04/2021 16:17
US dollar - Rand ixabiso ngoku kwi zonaniso Forex ngelo 16 UTshazimpuzi 2021
16:17:30 (Umyinge Forex uhlaziyo in seconds 59)
1 USD = 14.31 ZAR
Umthombo US dollar ukuya Rand ireyithi yotshintshiselwano lwe-Forex. US dollar ukuya Rand ihlaziya rhoqo kwimizuzwana engama-30. Ngephanyazo US dollar ukuya Rand. Ukutshintsha kwexabiso kwi-intanethi ngomzuzu, iyure, iveki, inyanga.
Itshathi Forex yorhwebo Rand ukuya Dollar siphila 16 UTshazimpuzi 2021
Itshathi Forex yorhwebo US dollar Ukuze Rand ubomi, 16 UTshazimpuzi 2021
Kwiwebhusayithi yethu unokufumana itshathi ye US dollar ukuya Rand inqanaba lotshintsho kwi 16 UTshazimpuzi 2021. Igrafu ngokukhawuleza ibonakalisa ukuguquguquka kwe US dollar ukuya kwi Rand. Khetha inqaku kwitshathi ukufumanisa eyona nqanaba lokutshintshiselana ngexesha elifanelekileyo. I US dollar ihlala ihlaziywa rhoqo, njengoko indawo yethu ifumana idatha kwi-Forex.
Tshintshela US dollar Ukuze Rand US dollar Ukuze Rand Imali yokutshintsha US dollar Ukuze Rand imbali izinga lotshintshiselwano
Lokurhweba ngekhompyutha US dollar (USD) ukuba Rand ngelo xesha
Ixabiso lokutshintshwa kwembali ngomzuzu ngamnye. 0.0019 ZAR ngomzuzu ukunyusa US dollar ( USD) ukuya ku Rand. Indawo ibonisa itafile yokuthumela imizuzu eli-10 ye US dollar ukuya kwi Rand ngomzuzu ngamnye. Kulungele ukuthelekisa utshintsho kumanani otshintshiselwano ngemizuzu nganye.
14.31 14.30 14.30 14.31 14.31 14.31 14.31 14.31 14.31 14.31
Lokurhweba ngekhompyutha US dollar (USD) ukuba Rand urhwebo lilixa lokugqibela
Qho ngeyure silanda inqanaba lotshintshiselwano. 0.01 ZAR - utshintsho kwi US dollar ( USD) ukuya ku Rand kule yure. Ireyithi yokutshintsha kwenani ngalinye US dollar ukuya kwi Rand kwitheyibhile iiyure ezili-10. Ukuthumela ngokulula ulwazi ngenqanaba leeyure kwindawo.
14.31 14.31 14.31 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30
Lokurhweba ngekhompyutha US dollar (USD) ukuba Rand Intsingiselo yanamhlanje 16 UTshazimpuzi 2021
16:17 15:17 14:17 13:17 12:17 11:16 10:16 09:00 07:46 06:46
14.31 14.30 14.30 14.31 14.31 14.32 14.32 14.30 14.29 14.24